10 sababaha cuncunka kadib xiirista - waxaad leedahay XAL! | Ragga Stylish
10 sababaha cuncunka kadib xiirista kadib
Villamandos | | La xiiray, Daryeelka shaqsiyeed
Xiirashada ayaa muhiim u ah ragga badankood, inkasta oo ay aad iyo aad u badan ragga door bidaan inay xiraan garka weyn oo ka badbaadiya shaqada mararka qaarkood daasha ee xiirista maalin kasta. Xiirashada caadiyan waa hawl fudud oo dhakhso leh in kastoo mararka qaar ay u horseedi karto dhibaatooyin aan cidina rabin inay dhacdo.
Waana in raggu sida caadiga ah xiirtaan iyagoon ilaalinaynin dhinacyada aasaasiga ah isla markaana ay u sameeyaan sida caadada cadaabta oo kaliya waxyaabaha uun sii murgisa. Mid ka mid ah dhibaatooyinkaas soo bixi kara ka dib xiirashada ayaa ah tan xanaaqa maqaarka, oo ku dhici kara sababo kala duwan sida.
Maanta iyo maqaalkan waxaan ku tusinaynaa adiga 10 ka mid ah sababaha jidhkeenu u xanaaqayo markuu xiirayo. Iyagu waa uun 10 ka mid ah sababaha badan ee jidhkeennu u xanaaqi karo, laakiin shaki la’aan inay yihiin kuwa ugu caansan uguna soo noqnoqda badan. Haddii aadan rabin xiirista inay cadaab noqoto, isku day inaadan hubin in mid ka mid ah sababahan ay maalin kasta ku dhacaan xiirashadaada.
1 Xiirashada qallalan
2 Ku xiira biyo qabow
3 Ku xiirashada daab aad u duugoobay
4 Ku xiirashada daab daxalaystay
5 Ku xiirashada cadaadis badan
6 Degdeggu ma fiicna
7 Hadhuudhka ka xiir
8 Xiirashada adoo ku garaacaya istaroog fara badan isla aagga
9 Isticmaalka aalkolo ka dib
10 Ku xiirashada qalab aan ku habboonayn baahidaada
Ragga badankood waxay xiirteen marmar, iyagoo aan wajiyada qoynin oo aan xumayn, badanaa sababta oo ah way naga dhammaadeen mana aanan xasuusan inaan ka iibsanno maalin ka hor dukaanka weyn.
Nasiib darrose qalajinta xiiran ma aha fikrad aad u fiican, in kastoo marka hore ay umuuqato inaysan wax cawaaqib ah lahayn. Marka laga reebo haddii aanan wajigeena ku qoynin, biyo kulul haddii ay suurtagal tahay ama aan xumbo ama jel ku furinno daloolada wajigeenna, markaan dhammeyno xiirashada waxaan la kulmi doonnaa cuncun muhiim ah oo ka sii weyn.
Ku xiira biyo qabow
Waxay umuuqataa doqon laakiin ku xiirashada biyaha qabow waxay sababi kartaa cuncun weyn maqaarkayaga. Mar alla markii ay suurta gasho waa muhiim in lagu xiirto biyo kulul maadaama tani ay fureyso daloolada maqaarka, waxay u diyaarineysaa xiirashada waxayna ka hortageysaa cuncunka dhibta leh.
Ku xiirashada daab aad u duugoobay
Dhamaanteen waan ognahay in xiiranka xiirista aysan sax aheyn raqiis, laakiin taasi maahan sababta aan ugu xiirano subax kasta daab aad u duugan taasina waxay sababi kartaa cuncun.
Haddii daabka aad adeegsaneysaa uu aad u duugan yahay oo uusan sidii la rabay u goynin, waa inaad ka fekertaa beddelkiisa, xitaa haddii ay tahay inaad lacag cusub oo yuuro ah ku bixiso mid cusub. Waxaan kugula talineynaa inaad xirto indhahaaga markaad wax bixinayso, si dhakhso ah u sii iyaga oo ha ka fikirin waxa ay garbaha qaarkood kugu kiciyeen ee aad ku xiirato oo keliya.
Ku xiirashada daab daxalaystay
Ku sii wadida wixii aan horay uga soo hadalnay qaybtii hore, waa lagama maarmaan in aan lagu xiirin daab aad u duugan oo dabcan waa inaad daawataa inaysan ku miridhsanayn qayb ka mid ah qaybaheeda. Caleemaha raqiiska ah si fudud ayey u mirxiyaan haddii aynaan si isdaba joog ah u isticmaalin ama haddii aynaan beddelin waqti ka waqti, taas oo kaliya u horseedi karta dhibaatooyin, kuwaas oo dabcan ay ka mid yihiin cuncun maqaarkayaga ah.
Ku xiirashada cadaadis badan
Xiirashada dalbashada cadaadis aad u badan waqtiga intiisa badan waxay maqaarkayaga ka dhigtaa cuncun, raaxo-darrada ay tan u maleyneyso. Had iyo jeer maahan fursad aan ku xiirano cadaadis badan tanina badanaa waa natiijada ogaanshaha sida loo xiirto, in daabku aad u duugmay oo aanu jarin ama aan u xiirno qallalan sidaa darteedna ay lagama maarmaan tahay in cadaadis dheeri ah la saaro si ay daabku si fudud ugu dhex maro maqaarkeenna.
Haddii aad ogaato inaad xiirto codsi badan oo cadaadis ah, istaag hal ilbiriqsi si aad uga fikirto sababaha ay tani u dhici karto hana sugin illaa wajigaagu casaan noqdo sida yaanyo si aad u gaarto go'aanno iyo tallaabooyin.
Degdeggu ma fiicna
Xiirashada dhaqsaha badan ma ahan wax fiican waana in dhinaca aan ku dhameysan karno nabar, mararka qaar aad muhiim u ah, wajigeena, laakiin sidoo kale xanaaq weyn oo aan ka qoomameyno isla marka aan dhameyno xiirashada.
Waan ognahay inay waxoogaa waalan tahay, laakiin ku raaxeyso xiirashada oo sii 15-20 daqiiqo si khibraddu uga dhigto mid sida ugu macquulka badan.
Hadhuudhka ka xiir
Xiirashada ka soo horjeedda hadhuudhka waa wax ay rag badani sameeyaan sababo kala duwan awgood, oo ay ka mid tahay raaxaysi, ka-hortagga gadhka inuu dhakhso u soo baxo ama raadinayo saamaynta ka soo horjeedda, in gadhku bilaabo inuu ka soo baxo goobo cayiman oo aan aad uga yaraannay. Si kastaba ha noqotee xiirashada habkan waxay sababi kartaa cuncun maqaarka ah.
Haddii tani ay tahay kiiskaaga, iskuday inaad u xiirto jihada timaha gadhka oo ha ku cusbooneysiinin inaad ku sameysid miraha haddii aadan rabin inaad yeelato xanuun gaar ah daqiiqado yar ama xitaa saacado.
Xiirashada adoo ku garaacaya istaroog fara badan isla aagga
Inaan soo marno isla aag dhowr jeer oo leh daab waa wax noo oggolaan kara inaan si buuxda uga tagno aagga, laakiin isla waqtigaas waxaan sababi karnaa xanaaq weyn. Markaad xiirto, isku day hal ama laba istaroog ugu badnaan aaggu waa qumman yahay, haddii kale haddii aad waqti badan ku qaadato isla aagga, si fudud ayaa looga xanaaqi karaa.
Ka taxaddar haddii daabku aad u daalan yahay ama xitaa daxalaystay, maaddaama haddii aad isla goobtaas dhowr jeer aad dhex marto iyadoo mindhicirka xaaladdiisu liidato, natiijadu aad bay kuu xanuun badan tahay.
Isticmaalka aalkolo ka dib
Mid ka mid ah khaladaadka ugu badan ee ragga badani sameeyaan kadib markay xiiraan waa codsi a khamri kadib, taas oo aan wax ka badan ka badneyn cuncunka maqaarka wajigeenna.
Isla marka la dhammeeyo xiirashada, fikradda wanaagsan ayaa ah in la isticmaalo kiriim ama balsam aan ku jirin aalkolo, si looga fogaado xanaaqa iyo gaar ahaan in la joojiyo waayo-aragnimada ay tahay inay tahay mid wacan oo aan ahayn wax ka soo horjeedda.
Ku xiirashada qalab aan ku habboonayn baahidaada
Xitaa haddii aad xiirtay sanado oo aad leedahy farsamo badan oo daab leh, waxay noqon kartaa mid aan waxtar lahayn haddii aadan haysan qalab habboon oo aad subax kasta u xiirto. Hubso inaad haysato daab ugu habboon baahiyahaaga iyo inay xaalad wanaagsan ku sugan tahay, maxaa yeelay haddii kale waxba tari mayso haddii aad boqolaal jeer iyo boqolaal jeer xiirtay.
Ha noqon jiir, inkasta oo markay timaado xiirashada, waxaan ognahay inay adag tahay, oo naftaada u soo iibso garbaha wanaagsan ee aad ku xiiraysid waa waayo-aragnimo lagu farxo ee ma ahan jirdil dhab ah, oo ku dhammaata nabarro iyo cuncun wejigaaga ah.
Sidii aan horey kuugu sheegnay, kuwani waa uun qaar ka mid ah sababaha maqaarka wajigaaga uu ugu dambayn karo xanaaq, laakiin waxaa jiri kara qaar kale, taas oo aad ugu tiirsan xaalada maqaarka mid kasta, sidaa darteed ka taxaddar marka uu yimaado xiirashada, maxaa yeelay inkasta oo aad sameysay boqolaal jeer waxaad ku dambeyn kartaa inaad la kulanto khibrad xun oo xanuun badan.
Diyaar ma u tahay inaad xiirto adigoon ku xanuunsan cuncun maqaarkaaga ah?.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » 10 sababaha cuncunka kadib xiirista kadib
27 faallooyin, ka tag taada
samee 15 sano
Beddel wanaagsan oo dabada dambe ee aan isticmaalo waa Aloe Vera, way ii shaqeysaa aniga, iyo sidoo kale kareem kasta oo leh Collagen, kuwani waxaa loo isticmaali jiray hooyaday waxayna igaga tageen wejiga qumman ... (haa, waa qaali ).
Ku jawaab MacCano
Alan Cesarini Farrow dijo
Haa, Aloe Vera wuxuu ku fiican yahay dejinta cuncunka iyo fuuq-baxa maqaarka. Waxaa sidoo kale si heer sare ah loogu talinayaa inay tahay aftersun
Jawaab Alan Cesarini Farrow
Waan xiiray oo kubad adag ayaan ka helay garka hoostiisa what. Maxaan sameyn karaa?
Ku jawaab juan
Waxaan ahay 17 sano jir markaan xiirana waxaan had iyo jeer leeyahay cuncun.
Waxaan isticmaalaa seddex daab, daab xiiran iyo williams xumbo.
Maxaad igula talinaysaa si aanan u xanaaqin xanaaqa?
A iyo in aan la dhihin hadaan xiirto labo maalmood oo isku xigta, ha arag sida wejigeygu u egyahay.
Sidoo kale waxaan jecelahay in si cadaalad ah loo xiiro maxaa yeelay xoogaa waan ka xishoonayaa in la ii arko iyadoo aan la xiiran, waad ogtahay da 'kasta oo ay jiraan wax kasta oo cusub oo ku baxaya la qabsiga.
Mahadsanid Waxaan rajaynayaa jawaabaha warqadayda mahadsanid.
Waad ku mahadsan tahay talooyinka!
Ku jawaab Hannibal
ISTICMAALKA EMRSOL EMULSION MA HAYO CARRUUR WAANA NOO XURAY NAFTAYDA CAJIIB
Ku jawaab CARLOS
Waad salaaman tihiin dhibaato ayaan qabaa maalin dhaweyd oo aan xiiray waxaanan gashaday qoyaan-qoyan oo aanan isticmaalin ka dib markaan xiirto kadib, si fiican wax yar kadib markaan garka iga xiiray waxay bilaabeen cuncun badan waxaan ka eegay muraayadda galkuna aad ayuu u casaa, ilaa taariikhda Next casaanku wuu sii socday waxaanan lahaa maqaar qolof leh 4 maalmood ka dib casaanku wuu yaraaday laakiin miisaanku wuu sii socdaa, maxaa sabab u noqon kara?
Ku jawaab david
SALAAN QAADO QOF KASTA, XALKA Timaha XIRIIRA WAA EMRSOL EMULSION
GIFTANDCARE AYUU LEEYAHAY, KA TAGAY MAQAARKA OO LAGU SOO DHAWEEYAY CAAFIMAAD OO AAD IYO JILIC AAD U MACAAN.
Waxaan u maleynayaa inay tahay wax aad u qosol badan in ilmo yar oo jira sanad jir waxaan u maleynayaa inaan xiirayo cuncunka uu keenayo waa wax badan maxaa yeelay wuxuu leeyahay maqaar aad u jilicsan maxaa yeelay maqaarka dhallaanka ma lahan dad jarmal ah waana sababtaas darteed maskax jilicsan laakiin naxdin leh waxa aan raadinayo ayaa ah marka dadku noqdaan kuwo ciil u qaba dadka kale si wanaagsan taasi waa macasalaameyn maxaa yeelay waxaan ka tagayaa internetka maxaa yeelay internetka halkaas kumbuyuutarku aad ayuu u jilicsan yahay
Ku jawaab mariana
Marco T dijo
Waad salaaman tihiin, sida ugufiican ee loo helo boggan, waxaan leeyahay maqaar aad u qalalan mana xiirsan karo hadii uusan dhaafin uguyaraan 3 maalmood, sugitaan la'aana waxay keenaysaa cuncun maqaarka ah, qof ma wax igala talin karaa
Ku jawaab Marceo T
Waad salaaman tahay waxaan jeclaan lahaa inaad i caawiso ama aad wax u soo jeediso xanaaqa, muddo dheer ayaan la soo taagnaa dhibaatadan waxaan isticmaalay dhowr shey oo isku dhib ayaan ahay waad ku mahadsan tahay wada shaqeyntaada ...
Ku jawaab renzo
Dhibaato ayaan qabaa markasta oo aan xiirto marwalba waxay ii keentaa xanaaq badan waxayna igu kaliftaa inaan bilaabo inaan yeesho fin iyo fin.
Maxaad igula talinaysaa inaan sameeyo ama aan u adeegsado si looga fogaado dhibaatooyinkaas ???
Ku jawaab jose
Waad salaaman tihiin dhamaantiin, marwalba waxaan dhib badan ku qabay xiirashada, xanaaqa ... barar ... casaan ... 3-daab daabkiisu sifiican buu u shaqeeyaa laakiin oh maxaa ogsoon in inta u dhexeysa daab iyo daab uu jiro kala-goyn! Taasi waxay ka dhigeysaa inay timuhu si wanaagsan u socdaan oo aan hal mar isku buuqin! taasi waa sababta dhabta ah ee dhibaatooyinka xiirashada oo dhan !! cadee !! iyo kadib markii aad xiiraysid qoyaan badan !! Salaan!
Ku jawaab XAVIER
Waad salaaman tihiin asxaabteyda mareegaha weyn! Waxaan kuu sheegayaa wax ku saabsan khibrad aan soo maray markii aan xiirayay wixii markaa ka dambeeyay noloshaydu way is bedeshay.
Marka ugu horeysa waxa wiilkaagu sameeyo waa inuu geta ku dhaqaa biyo yar oo diirran. oo ay kugu xigto waa inaad ku qooysaa kaadi .. hadaad kaadido. Markaad aadeyso ñoba, iskuday inaad pichin kusii haysatid weel si aad u awoodo inaad isticmaasho .. markaa waxa pichin uu sameeyo waa sunta sunta ee geta .. ka dib markaad hesho geta si fiican loogu qooyey pichin u gudub ajeitado .. , had iyo jeer si taxaddar leh oo aad ugu roon tahay koritaanka timaha…. Trick lambarka 2. (kii ugu horreeyay wuxuu ahaa pichin)… hadda wuxuu yimid waxa muhiimka ah. taas oo aan ka dhigi doonin in geta kaa xanaaqo. ha helin finanka ama timaha aan soo galin .. aad u wanaagsan. waxa wiilkaagu sameeyo waa mid aad u fudud. Waa inaad jiido, haa jiido. laga yaabaa in wax la soo maro netka. joornaalada. ama male-awaal .. ma aqaan. waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto saaxiib. xaaskaaga saaxiibkiis, sifiican ayaad u ogaatay.! sirta ayaa ah in si fudud loogu gudbiyo uasca wajigaaga, maadaama uasca ay leedahay waxyaabo aad u wanaagsan oo maqaarka ah .. maadama maadadan ay ku urursan tahay nafaqooyin badan .. si wanaagsan waxaan u idhi nabad galyo adiga oo ku farxaya xiir aad u fiican oo aan dib u kulmi doonno markay soo bax Su'aalo badan inta aan ka jawaabi karo iyadoo aan ka badneyn runta. majaajillo iyo been ma leh. nabad gelyo!
PS: Hubso in wiilku helo cadar badan kadib markuu xiiro. haddii kale dadku waxay u maleynayaan inaad tahay qaniis nacayb badan oo wajiga ku dambaysa!.
Jawaab Jose Maria
Sanam ... kaadida ama kaadida ama caarada ... Waxaan ugu isticmaalay macallimiinta barashada jimicsiga gubashada gacmaha inay ka shaqeeyaan baararka iyo waxyaabaha la midka ah ... salaan
mee waan xiiray dhankii dhabanka iyo meirriteega waxaana igu bilaabay finan inay soo baxaan miyay fiicantahay in markale la xiiro?
Buuggu waa mid aad u wanaagsan, laakiin waxaan kugula talin lahaa in ragga ay ku dhiirrigeliyaan inay wax cunaan, waxay u fiicnaan laheyd qof walba, gaar ahaan jiilalka cusub maadaama inkasta oo gadhka iyo shaarubahu yihiin astaamo ragganimo, kuwa ragga lagu yaqaan, ragga oo dhan ma wada laha. Qaar ka mid ah waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican halka kuwa kale ay u muuqdaan wax lagu qoslo. Marka laga hadlayo kuwa ugu yar (dhalinyarada iyo dhalinyarada) hadii ay u muuqato wax laga naxo in ay leeyihiin gadh ama shaarib maxaa yeelay waxay ka dhigeysaa inay u muuqdaan kuwo la dayacay oo wasakh ah, waxay kaloo kordhineysaa da 'da aan wali ku habooneen.
Garka iyo shaaribku waxay caadi ahaan isku xirnaayeen ragga qaangaarka ah, mana ahan kuwa ka yar yar, sidaas darteed wiilasha shaarubahooda ama garka xiiray waxay u muuqdeen dhalinyaro.
Ku jawaab javier
Waa inay isku dayaan Juveness 'daaweynta barafka, 100% qaaciidada dabiiciga ah ee ulaha barafka, waxay ka caawisaa caabuq iyo cuncun ka dib xiirista. Marka lagu daro koolajka iyo elastin, qabowgu wuxuu leeyahay faa iidooyin badan, raadi macluumaad dheeri ah sida daaweynta barafka Juveness ama p. Websaydhka Juveness
Ku jawaab claudio
Mindida ugu fiican ee la tuuri karo weligay baan isticmaalay oo waxaan idhi hubaal waa BIC.
Waxaan isticmaali jiray noocyo kale oo ay yiraahdeen waa kuwa ugu fiican mana sheegi doono iyaga magac xumo darteed. laakiin runtii ka dib markii aan isku dayay BIC waxaan xaqiiqsaday in noocyada kale ee qaaliga ah iyo in loo malaynayo inay yihiin kuwa ugu fiican, runtii waa wax aan fiicnayn oo waxay iibiyaan wax soo saar tayadiisu hooseyso si aan maalin walba u soo iibsano mashiinno.
Waan necbahay xiirashada maxaa yeelay wajigeyga wuxuu ahaa casaan iyo gubasho waqti dheer
laakiin BIC igama xanaajiyo haba yaraatee, maxaa yeelay waxay leedahay cirif aan iin lahayn waxayna ku sii socotaa xiirto badan
iskuday waadna ogaan doontaa inaanan waxba uhadleyn oo aad ujeclaatay mashiinadan sidii aan sameeyay
Ku jawaab juan005
Diego l. dijo
Waan ku raacsanahay Juan sidoo kale waxaan isticmaalaa BIC waana mashiinka kaliya ee aan maqaarkayga ka cadhaysiinin.
Ku jawaab diego l.
Wax dhib ah kuma qabo in aan wajigayga xiiro MA OGTAHAY HALKAN?
Gabriel wuu isku duubay dijo
Waad salaaman tahay dhibaato ayaa i haysata maalintii kale ee aan xiiray waxaanan gashaday qoyaan-qoyan oo aanan isticmaalin ka dib markaan xiirto ka dib, si fiican wax yar ka dib markii aan xiiranahay garka ayaan bilaabay cuncun badan waxaan ka eegay muraayadda galkuna aad ayuu u casaa, ilaa taariikhda Next casaanku wuu sii socday waxaanan lahaa maqaar qolof leh 4 maalmood ka dib casaanku wuu yaraaday laakiin miisaanku wuu sii socdaa, maxaa sabab u noqon kara?
Gabriel wuu isku duubay
Jawaab Jibriil ayaa koobaya
Haye, waxaan ahay 26 jir, waxaan xiiray prestobarva kale waxaanan wajiga cas ku leeyahay dhabankayga, maxay noqon lahayd taasi?
Ku jawaab pedro
John Marin dijo
Waxay igu dhacday si la mid ah kuwa badan, laakiin qaar ka mid ah talooyinka iyo isticmaalka Gillette Match 3 Turbo dhibaatadaas way dhammaatay, waa mashiin siiya xiira-fiiq leh oo aan maqaarka ka xanaajin, waa wax aad u fiican isticmaal, rajo ahaan iskuna day 🙂
Ku jawaab John Marín
Michelle J Henninger dijo
Isku day Karmin
Jawaab Michelle J. Henninger
SIDAN WAA XALKA UGU FIICAN:
1) Waa inay xiiraan ka hor qubeyska.
2) Gasho ALCOHOL BILAASH af-xiiran intaadan xiiran xiiran.
3) Xiro xumbada xiirashada maqaarka xasaasiga ah.
4) Sug ilaa 5 daqiiqo wakiiladu inay ku dhaqmaan maqaarka.
5) Isticmaal GILLETTE MACH 3 mandiil mandiil ah
6) Qolka qubeyska ku isticmaal saabuun qoyan oo kareem ah (saabuun DOVE ayaa ugu fiican)
Nidaamkan ka hor waa inaan xiiraa 3dii maalmoodba mar maxaa yeelay cuncunku aad ayuu u xumaa. Hadda waan xiiraa maalin kasta.
qarsoodi la'aan dijo
Kaliya waan xiiray guska iyo kubbadaha, hadana waxay igu noqotay noloshayda. maxaa nasiib ah oo aan sameyn karaa Dhammaan wixii si fiican loogu soo bandhigi lahaa si loo tago oo loo dhigo haley dheriga ..
Jawaab si qarsoodi ah
Sneakers camouflage, moodada kabaha dagaalyahanada
Sida loogu beddelo mandiil caan ah